Loza teny Anjozorobe : maro ny mpanararao-paty tia fisehosehoana | NewsMada
Loza teny Anjozorobe : maro ny mpanararao-paty tia fisehosehoana
Anisan’ny nampitaraina ireo fianakaviana sasany sy ny mponina ao Anjozorobe ny mpanararao-paty tamin’iny loza iny nentina nisehosehoana. “Henonay izao mihitsy ny fibaikoana mpanao gazetin’ny haino aman-jerim-panjakana nataon’ireo minisitra ny mba hampidirana azy ireo anaty sary alaina. Tandremo sao tsy tazana ny minisitra (…). Ataovy anaty sary i (…) sns”, hoy ireto niresaka tamin’ny mpanao gazety. Nampalahelo ireo olona ny fisehosehoana ataon’ny mpitondra fanjakana manararaotra ny fahorian’izy ireo. Zavatra efa mpitranga ihany izany satria izay ilay paik’adin-tseratsera entina hisehoana vahoaka rehefa misy ny irika ahafahana manao izany.
Nilaza ny olona fa ry zareo tao Anjozorobe no tena naneho firaisankina sy fifanampiana tamin’ity loza niseho ity. “Nisy ireo olona tonga dia nanome fiara nitaterana ny razana, nitaterana ireo olona nalefa taty an-dRenivohitra niaraka tamin’ny fiantohana gazoala mandroso sy miverina. Ireo fokonolona no tena nanavotra ireo olona rehetra sy nampakatra ny razana fa efa tara ireo avy amin’ny fanjakana”, hoy ireto fianakaviana.
Tsara ny fisehosehoana, saingy tsy amin’ny raharaha tahaka izao kosa. Mihevitra ry zareo mpitondra fa mety hampiakatra ny lazany ny fisehoana televiziona, misary mahavita zavatra sy mandray andraikitra, kanefa mety hampalahelo ny olona. Tsy tokony hanararao-paty!